Izindawo zokungcebeleka ezishushuluza e-Andorra naseSpain | Ukuhamba kwe-Absolut
Izindawo ezihamba phambili zokushibilika eqhweni e-Andorra naseSpain
Ukuhamba kwe-Absolut | | Andorra
Ngemuva kokuphela kwehlobo, sekuyisikhathi sokucabanga ngezindlela zethu ezilandelayo. Ngakho-ke, phakathi kokuhlukahluka kwamathuba akhona inketho ye- chitha izinsuku ezimbalwa ujabulela iqhwa nokushushuluza eqhweni eziteshini ezahlukene e-Andorra noma eSpain.
Njengoba kungelula ngaso sonke isikhathi ukusho ngesiteshi esithile, ngezansi uzokwazi ukwazi imininingwane yezindawo zokungcebeleka ezishushuluza kulezi zindawo.
2 I-Baqueira Beret
I-Grandvalira ski resort ihlukile kwabanye ngokuba amakhulu kunawo wonke amaPyrenees. Kutholakala ku-Principality of Andorra, njengamanje inamathambeka angaphezulu kwamakhilomitha angaphezu kwama-200. Esinye sezici eziyinhloko zalesi siteshi kungukuthi ubuchwepheshe e-alpine skiing: umdlalo oqukethe ukwehla kwethrekhi esikhathini eside ngangokunokwenzeka, ukulandelela umzila omazombezombe. Ungathola okungcono kakhulu Izindlela zokuya e-Andorra nge-Esquiades.com.
Amathrekhi eBaqueira Beret
IBaqueira Beret, uma kungenzeka, enye yezindawo zokudlela zokushushuluza ezidume kakhulu eSpain, njengoba kuthanyelwa yinqwaba yosaziwayo, okugqama phakathi kwayo iNkosi uFelipe VI uqobo. Lesi siteshi sinenqwaba yamathrekhi aklanyelwe ukuguqulelwa emazingeni ehlukene ezivakashi zawo. Lezi zindlela zanda ngaphezu kwamakhilomitha ayi-155. Kutholakala e-Arán Valley, ePatalan Pyrenees, ukuyivakashela ungayisebenzisa ngokunenzuzo ukujabulela nezindawo ezinhle zasemazweni nokudla okumnandi kwendawo.
Isiteshi esihlelekile sine- Imithambeka engama-97 eshibilika lokho kufinyelela kumakhilomitha ayi-157 esewonke. Lesi siteshi sinezindawo ezimbili zokuthwesa iqhwa, ama-boardercross amabili ne-track ye-snowboard. Le nxanxathela inikela nangezinye izinsizakalo ezinjenge-skiing enqamula izwe noma ukugibela i-sleigh. Enye yezinto ezihlukanisayo zeFormigal ukuthi yabelana ngokudlula kwe-ski nesiteshi sePanticosa, ngakho-ke awukwazi ukushushuluza kuzo zombili iziteshi kepha futhi uphumule ku-spa esikulesokugcina. Isiteshi esisemthethweni sisesifundazweni saseHuesca.
Kutholakala esifundeni saseCerdaña, eCatalonia, isiteshi saseLa Molina sincane ngosayizi, kepha hhayi ngenxa yaleso sizathu sekhwalithi ephansi. Sekukonke, indawo yokubhuka inamathrekhi angama-54 aqoqa ingqikithi yamakhilomitha angama-61 okushibilika kuwo. Isiteshi saseLa Molina saziwa umhlaba wonke ngokusingatha inombolo enhle ye- imicimbi yamazwe omhlaba emhlabeni wokushushuluza. Phakathi kwezinsizakalo zayo kungenzeka ukuthi ugibele abagibeli beqhwa, ukuphuma ngezimoto ezihamba ngeqhwa kanye nezihlibhi, phakathi kwabanye.
Indawo yaseSierra Nevada ski resort yaziwa kakhulu njengenye yezindawo zokungcebeleka ezihamba phambili eSpain. Eminyakeni yamuva nje, lo msakazo ubuye wagqama kakhulu izinhlelo ezibanzi ezibhekiswe ezinganeni. Ngale ndlela, indawo yokuvakasha yaseSierra Nevada inemithambeka eyenzelwe umkhuba wendlu encane kunazo zonke zendlu, kanye nepaki yokuzijabulisa efaka izinto ezikhangayo ezinjenge-roller coaster nezimoto ezihamba eqhweni. En Esquiades.com Ungathola konke okunikezwayo kokubili esiteshini saseSierra Nevada nakwabanye abaningi abatholakala eSpain, Andorra naseFrance.
Isiteshi seCerler yisiteshi esiphakeme kunazo zonke e-Aragonese Pyrenees. Kutholakala eSigodini SaseBenasque, iCerler ihlukile kwezinye ngoba izungezwe izindawo ezinhle nezindawo eziphakeme. Kanjalo nesiteshi iCerler sinakho imithambeka emikhulu lokho kungatholakala kule ndawo, okuphakathi kwamamitha ayi-1.500 kanye nama-2.700. Lesi sakhiwo sinamakhilomitha angama-79 emithambekeni yokushibilika, eyenzelwe amazinga ehlukene okufunda kwezivakashi zayo.
Izinga leqhwa lingezinye zezici ezinhle kakhulu zokungcebeleka kweBoi-Taül. Etholakala esifundazweni saseLleida, lesi siteshi sinenani elikhulu lama-run abomvu, ngakho-ke iningi lenkimbinkimbi yakhelwe ukushushuluza kwamazinga aphezulu naphakathi, hhayi eyabantu abasaqala emkhubeni wokushushuluza. Lesi siteshi sinendawo ebekelwe i-snowpark, eyaziwa njenge- "freeXperience". Futhi, enye into enhle yesiteshi seBoi-Taül ukuthi ngokuvamile ayihlali kakhulu.
Lesi siteshi sikhona enkabeni ye-Aragon Valley, ikakhulukazi kumasipala waseJaca. Lesi sakhiwo sinenani elikhulu lezinsizakalo zokudlela namakhilomitha angama-50 emithambekeni ye-ski. Ngenxa yendawo okukhona kuyo, i-Astún ski resort ihlanganisa kahle ezemidlalo nezokuvakasha nezokungcebeleka. Ngale ndlela, ukubalekela e-Astún kungafaka izindlela ezahlukahlukene eza kude kakhulu nokushushuluza..
E-Andorra, iVallnord ski resort isezigodini zase-Arcalís naseLa Massana. Amathrekhi ayo angaphezu kwama-68 esewonke angama-93 amakhilomitha, agcwele i- a iqhwa eliphezulu, kuqinisekiswe ngendawo esiteshini. Lesi sakhiwo sinepaki lamabhayisikili labathandi bamabhayisikili asezintabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Izindawo ezihamba phambili zokushibilika eqhweni e-Andorra naseSpain
Amadolobha amahle eduze neBarcelona
Yini ongayibona ezweni laseBasque: Kusuka ku-Game of Thrones kuye ku-flysch edumile